Fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana Tosika ho an’ny orinasa Malagasy
Seha-pihariana lavanila Mamelona Malagasy 200 000
Hisokatra ny 15 jolay izao ny fiotazana lavanila ho an’ity taona 2019 ity eto Madagasikara.
Augustin Rakotonirina “Maika ny fampandrosoana ny faritra Alaotra Mangoro”
Anisan’ny asa maika miandry ny solombavambahoaka Augustin Rakotonirina, lany tany amin’ny distrikan’i Moramanga manomboka izao ny fampandrosoana ny Faritra misy azy.
International Fair Tourism Madagascar 2019 Andrasana ny akony eo amin’ny fizahantany
Nifarana omaly alahady 16 jona ny hetsika fampirantiana momba ny fizahantany ITM andiany fahavalo nokarakaraina teny amin’ny CCI Ivato. Mpandray anjara miisa hatrany amin’ny 300 no nampiranty ny tranohevany teny ary nahatratra 15 000 ny mpitsidika.
Sehatra fizahantany Hanainga haingana ny toekarena Malagasy
Nanomboka omaly alakamisy 13 jona teny amin'ny CCI Ivato ny salon ITM (International Tourism Fair Madagascar) andiany fahavalo.
Ketrika.com Manakaiky kokoa hatrany ny mpanjifa
Mandray anjara eny amin’ny ITM 2019 andiany faha-8 eny amin’ny CCI Ivato ny www.ketrika.com.
Toekarena sy fandraharahana Mpanondrana lavanila miisa 139 no nahazo fankatoavana
Tafiakatra 130,9 tapitrisa dolara ny tombony azo tamin`ny fanondranana lavanila ny telo volana voalohany ny taona, nahitana fiakarana 15,9% izany.
Tontolon’ny fandraharahana Manomboka mahazo laka ny vehivavy
Mba ahafahana mametraka ny anjara toeran’ny fandraharahan’ny vehivavy eto Madagasikara dia roa andro no hanatanterahana ny Fikaonandoha mahakasika ny fandraharahan’ny vehivavy matihanina na ny “Women in business”
Notanterahina tetsy amin’ny hotely Carlton omaly alatsinainy 06 mey ny latabatra boribory ara-toekarena andiany fahadimy izay iarahan’i Madagasikara sy ny vondrona eoropeanina.
Nandray anjara tamin’izany ny sehatra tsy miankina, ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra ary ny asa tanana, ny minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola, ny minisiteran’ny fanajariana ny tany ary ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola. Tanjona ny hijerena ny olan’ireo sehatra tsy miankina eto Madagasikara eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana ary mazava ho azy ny vahaolana mifandraika amin’izany. Noresahana tao ny momba ny fanatsarana ny raharaham-barotra izay manahirana ny mpandraharaha Malagasy amin’izao fotoana. Eo ihany koa ny fanamafisana sy ny fitazonana hatrany ny fifampiresahan’ny fanjakana sy ny tsy miankina (Dialogue Public Privé). Natao izao mba hanomezana tosika sy hanatsarana ny orinasa Malagasy manontolo. Eo ihany koa ny hampiroboroboana ny sehatra fanondranana sy ny kalitaon’ny entana ahafahana mifaninana tsara. Efa voafaritra ao anatin’ilay tetikasa PROCOM vatsian’ny Vondrona Eoropeanina nandritra ireo fifanatrehana andiany faha-4 efa vita sy ity andiany fahadimy ity izany. Tahaka ny mahazatra dia misy hatrany ny fifanarahana nosoniavina ary miompana amin’ny fiaraha-miombon’antoka ara-toekarena. Hiteraka tombony ara-barotra ho an’i Madagasikara izy io satria sady hoentina hanatsarana ny sehatra fanondranana no hanampiana tosika ara-bola sy ara-kevitra amin’ireo tanora hatrany amin’ny faritra. Tanjona ny hampiroboroboana amin’ny fotoana fohy ireo orinasa sy mpandraharaha mpanondrana entana ireo ka hojerena manokana mihitsy any amin’ny faritra izay lasa anjorombala nefa manankarena vokatra. Eo ihany koa moa ny fitadiavana lalam-barotra amin’ny tsenan’ny firenena samy afrikanina tahaka ny SADC sy COMESA hanatsarana hatrany ny toekarena